वीरमा अनुकुल हाकिम खोज्नेहरू, कामचोरदेखि जेलबाट छुटेकासम्म
पौष २९, २०७८ २०:४६ मा प्रकाशित
कोभिड युनिफाइड अस्पताल(वीर अस्पताल)मा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएका डा. गुणराज लोहनीको सरुवा रोकिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. लोहनीलाई वीरको प्रमुखमा पठाउने निर्णय मंगलबार गरेको थियो। डा.लोहनी मन्त्रालयबाट पत्र लिएर बुधबार वीरमा आउने तयारीमा हुनुनुन्थ्यो । डा.लोहनीलाई वीरमा आउन नदिने भन्दै केही कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिए । कर्मचारीहरुले बिहीबार बिहान पनि केहीबेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा डा.लोहनीको सरुवा रोकियो ।
ऐनमा कोभिड युनिफाइड अस्पताल(वीर अस्पताल) प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतका लागि १२औँ तहको विशेषज्ञ डाक्टर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा.लोहनीलाई वीरमा पठाएको थियो ।
करिब ६ महिनादेखि वीरको नेतृत्व निमित्तको भरमा छ । निमित्त प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको जिम्मेवारीमा डा.भुपेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ । डा‍.बस्नेत १०औँ तहका अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँलाई ११औँ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको भएपनि बढुवा भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। कानुन अनुसार ११औँ तहकालाई मात्रै निमित्तको जिम्मेवारी दिन मिल्छ।
लोहनी आउँदा किन विरोध ?
डा.लोहनीलाई वीरमा आउन नदिन कर्मचारीले आन्दोलन गरेको भनी अनावश्यक हल्ला भएको त्यहाँका एक कर्मचारीले बताउनुभयो। थोरै झुण्डले गरेको विरोधलाई पूरै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएको जस्तो गरी प्रचार भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘वीरमा करिब १४ सय कर्मचारी छन्, विरोधमा उत्रिने १२–१५ जनाको समूह छ, यसलाई कर्मचारीको आन्दोलन भन्ने कि नभन्ने ?’ नाम बताउन नचाहने एक कर्मचारी प्रश्न गर्नुहुन्छ।
वीर अस्पतालको कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियन नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको अगुवाइमा डा.लोहनीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको हो । स्वास्थ्यकर्मी संघ, वीर अस्पतालका अध्यक्ष खुबराज आचार्य, सचिव दिपक मुडभरी यसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरुले डा.लोहनी वीरको नेतृत्वका लागि आयोग्य भएको आरोप लगाउनुभएको छ। आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि लोहनी आउनु खोजेको आरोप पनि विरोध गर्ने कर्मचारीहरुको छ । बाहिरबाट नेतृत्व ल्याउन नहुने र अस्पतालभित्रैको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएको छ ।
यो समूहले आफू अनुकुल बाहेकको नेतृत्व आउँदा जहिले पनि विरोध गर्ने गरेको त्यहाँका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाएर डा.जागेश्वर गौतमलाई नेतृत्वमा ल्याउँदा पनि आचार्य, मुडभरी नेतृत्वको समूहले विरोध जनाएको थियो।
उहाँहरु कामचोर कर्मचारी भएको र काम गर्ने नेतृत्व आउँदा काम ठगेर जागिर खान पाइँदैन भन्ने डरले विरोध गर्ने गरेको वीरका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.जागेश्वर गौतमको आरोप छ । ‘उहाँहरुलाई कांग्रेसबाहेकको व्यक्ति नेतृत्वमा आएको मनै पर्दैन’ डा.गौतम भन्नुहुन्छ, ‘कांग्रेसमा पनि मन परेको मान्छे मात्रै चाहिन्छ।’
ठगेर, चोरेर खान दिने नेतृत्व भए मात्रै उनीहरुका लागि स्वीकार्य हुने उनीहरू हाकिमलाई प्रभावमा पारेर, स्टोरमा बसेर अतिरिक्त आम्दानी गर्न पल्किएको डा.जागेश्वरको आरोप छ । कडा हाकिम आयो भने त्यो बन्द हुने त्रासले पनि उनीहरु विरोधमा उत्रिने गरेको आरोप उहाँको छ।
डा.गौतमका अनुसार वीरमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी अन्य निजी संस्थाहरुमा पनि काम गर्छन्। राम्रो नेतृत्व आउँदा त्यसो गर्न पाइँदैन भनेर पनि विरोध गरेका हुन्।
राम्रो नेतृत्व आएर वीरमा सुधार गरे, २०० बेड आइसीयू चलाए, दिनमा ५० वटा अप्रेसन गरे उनीहरुको प्राइभेटतिर भएको साइड बिजनेस सुक्ने भएकाले पनि राम्रो मान्छे नेतृत्वमा आउनै नदिने डा.गौतम बताउनुहुन्छ ।
जो पायो त्यही व्यक्तिले वीरका कामचोर कर्मचारीलाई काम लगाएर टिक्न नसक्ने र वीर सुध्रिन निकै कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘मैले पहिले पनि भनेको थिएँ नि, वीर अस्पताल सुधार्न जंगबहादुर जन्मनुपर्छ’ गौतम भन्नुहुन्छ।
वीरको नेतृत्वमा जानु लाग्नुभएका डाक्टर लोहनी असक्षम हो ?
डा.लोहनी एक सक्षम र इमान्दार कर्मचारी रहेको उहाँलाई चिन्नेहरु बताउछन् । लोहनी जस्तो व्यक्ति वीरको नेतृत्वमा आउनु निकै खुसीको कुरा भएपनि विरोध गर्नेहरुको नियत ठिक नभएको वीर अस्पतालका एक चिकित्सक बताउनुहुन्छ । ‘डा.लोहनी जहाँ गयो त्यहीँ सफल भएर आउनु भएको छ, ती चिकित्सक भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले ऐन अनुसार नै १२औँ तह डाक्टरलाई नेतृत्वमा पठाउँदा विरोध नहुनु पर्ने हो।’
डा.लोहनीसँग सहकार्य गर्नुभएका डा.जागेश्वर गौतम पनि उहाँलाई अब्बल दर्जाको कर्मचारी मान्नुहुन्छ।
'उहाँ त काम गर्ने मान्छे हो उहाँ खुरुखुरु काम गर्नुहुन्छ, कुनै २ नम्बरी मान्छे होइन’ गौतम भन्नुहुन्छ।' लोहनी जहाँ गयो त्यहीँ काम गरेर देखाउने मान्छे भएको डा.जागेश्वर पनि स्वीकार्नु हुन्छ ।
डा.जागेश्वरका अनुसार डा.गुणराज लोहनीलाई हेटौँडा अस्पतालबाट सरुवा गरेर अन्य पठाउने निर्णय हुँदा त्यहाँका स्थानीय लोहनीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन भनेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । ‘डा.लोहनीलाई हेटौँडाबाट सरुवा गर्दा स्थानीयले आन्दोलन नै गरेका थिए, २ दिन सडक जाम भएको थियो’ डा.गौतम भन्नुहुन्छ।
जेलबाट छुटेका मुडभरीको सधैँ चलखेल
अहिले डा.लोहनीलाई वीरमा आउन दिनुहुँदैन भन्दै केही कर्मचारीलाई पछि लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिनुभएका दिपक मुडभरीले डा.लोहनी आर्थिक चलखेलका लागि आउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ।
मुडभरी स्वयं भने एक डाक्टरको ५५ लाख पैसा खाएको आरोपमा जेल बसेर छुट्नु भएको हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)मा एमडी पढ्न नाम निकाली दिन्छु भन्दै मुडभरीसहित ४ जनाको मिलेमतोमा डा.मनोजकुमार साहबाट ५५ लाख लिएको खुलेको थियो ।
शाहले २०७१ सालमा एमडी अध्ययनका लागि न्याम्समा प्रवेश परीक्षा दिनुभएको थियो । अनुतीर्ण हुनुभएका शाहसँग मुडभरीको टिमले ५५ लाख लिएको पुष्टि भएको थियो । ठगिएका शाहले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले पैसा लिने दिपक मुडभरी र बिचौलियाको काम गर्ने अन्य दुई जनालाई २०७१ माघमा पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरी जेल सजायँ तोकेपछि मुडभरी जेलमा हुनुहुन्थ्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उहाँलाई २०७३ जेठ ३२ मा ५ वर्ष कैद र ७ लाख जरिवाना सुनाएको थियो।
दीपक मुडभरी २०७४ असोजमा उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएपछि जेलबाट छुट्नु भएको हो । छैटौँ तहका अहेब मुडभरीलाई संसद चलेका बेला संसद सचिवालयको काम तोकिएको छ । वीरका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले वीरमा उहाँको काम युनियनको अफिसमा बस्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने, पत्रकारहरुलाई फोन गरेर आफू अनुकलका समाचार लेखाउनेमा सीमित छ ।
युनियन अध्यक्ष खुबराज आचार्य गत महिना भएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा चुनावमै लड्नु भएको थियो । दोलखाबाट उहाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि उठेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भोट मागिरहनु भएको थियो।
अहिले खरिद इकाइमा रहनुभएका खुबराजलाई त्यहाँबाट फाइदा मिलिरहेको र त्यो गुम्ने डरले पनि विरोध गरिरहेको आरोप वीर अस्पतालका एक कर्मचारीले लगाउनुभयाे ।
कर्मचारी युनियनको बलमा आफ्नो अनुकल बाहेकको मान्छेलाई नेतृत्वमा छिर्ने नदिने र आएपनि काम गर्नै नदिने उहाँहरुले गर्दै आएको वीरका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
आफ्नो स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति भएन भनेर योग्य व्यक्तिलाई रोक्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै भएको दावी वीरका एक कर्मचारीको छ।
बेलायतले नेपाली नर्स लैजान मार्चसम्म सम्झौता गर्ने, न्यूनतम तलब ४९ हजार पाउण्ड